အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: September 2008
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:04 PM 18 comments:
လူတိုင်းမှာ သူတို့အတွက် အပျော်ဆုံးအချိန်ဆိုတာ ရှိတတ်ကြစမြဲပါ...။ လူထဲက လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ (မိမိ ကိုယ်ကို သတ်မှတ်ထားခြင်းမျှသာဖြစ်သည်) ကျွန်တော့်မှာလည်း အပျော်ဆုံး အချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်။ တစ်ခြား သူတွေနဲ့ နဲနဲကွာခြားမယ်ထင်တာ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ သူများတွေက ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ အတိတ်၏ ဖြစ်ရပ်များထဲ မှသာ အပျော်ဆုံးအချိန်ဆိုတာကို သတ်မှတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ အပျော်ဆုံး အချိန်က တော့ အနာဂတ်မှာပါ။ မရောက်သေးပါဘူး..။ ကျွန်တော်စောင့်ရအုံးမှာပါ...။ ဘယ်နေ့လဲ..? ဘယ်လောက် စောင့်ရမလဲ...? ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သေသေချာချာမသိသေးပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေပါစေ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ အဲ့ဒီ့နေ့ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အပျော်ဆုံးနေ့ တစ်ခု ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အယူအဆအရ အဲ့ဒီ့နေ့ရက်ကို ကျွန်တော်ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေထဲမှာ အမြင့် မြတ်ဆုံးလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အပျော်ဆုံးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဲ့ဒီ့ နေ့မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်း၊ ကျဆုံးခြင်း စတဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်မှာ လူသားတိုင်း မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ကြရမယ့် အစွန်းတရားတွေကနေ လွတ်မြောက်စွာ ရုန်းထွက်သွားနိုင်ခြင်းကြောင့်ပါပဲ။ စကားလုံးလှလှလေးနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ "သေခြင်းတရားဆိုတဲ့ တံခါးတစ်ချက်ကို ဖွင့်ခွင့်ရမယ့်နေ့" ပေါ့။
သေခြင်းတရားရဲ့ အဓိက တရားခံပါပဲ....။
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ အပျော်ဆုံးနေ့လေးကို ဘယ်လိုပုံ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဆင်နွဲ မယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်အဲ့ဒီ့နေ့လေးမှာ ဘာမှထွေထွေထူးထူး မတောင်းဆိုချင်ပါဘူး။ လိုလည်းမလိုချင်ပါဘူး...။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ (လူသားတို့ရဲ့သဘာဝအရ) နဲနဲတောင်းဆိုချင်ပါ တယ်။
ကျွန်တော့်၏ ပျော်ရွှင်ခြင်း အခမ်းအနားသို့....
၁။ မျက်ရည်ကျတတ်သူများ မတက်ရောက်ရ၊
၂။ ဟန်ဆောင် ပူလောင်ပြသူများ မတက်ရောက်ရ၊
၃။ လူမှုရေး အမြတ်ထုတ်လိုသူများ မတက်ရောက်ရ၊
၄။ သူများမကောင်းကြောင်း ကိုယ့်ကောင်းကြောင်း ပြောသူများ မတက်ရောက်ရ၊
၅။ "အနိစ္စ" စကားလုံးအား စာလုံးမပေါင်းတတ်သူများ မတက်ရောက်ရ။
၁။ သတင်းစာအတွင်း ထည့်သွင်းကြော်ငြာခြင်းမပြုရ၊
၂။ ယပ်တောင်များ၊ ရေသန့်ဘူး ဝေခြင်းများမပြုရ၊
၃။ နေကြာစေ့၊ ကွာစေ့၊ ဖရုံစေ့ အစရှိသော မည်သည့် အစေ့မှ စားသောက်ခြင်းမပြုရ၊
ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာ ဒီလောက်ပါပဲ...။ ကျန်တာတော့ထွေထွေထူးထူးမရှိပါဘူး။
ကျွန်တော့်ရင်ခုန်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အပျော်ဆုံးနေ့ရက်အတွက် ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှု တစ်ချို့ကို ငယ်စဉ်က စိတ်ကူးထားခဲ့တဲ့အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ရန်ကုန်မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း ဆေးရုံကြီးမှာ ကျွန်တော်မျက်ကြည်လွှာလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်မှ အသုံးမ၀င်တော့တာဗျာ...။ ဒါကြီးဘာသွားလုပ်မှာလဲ...။ တကယ်တော့ အာရုံငါးပါးဆိုတာ (အဆိုးမြင်နဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်) သတ္တ၀ါတွေရဲ့ သံသရာကိုမရှည်ရှည်အောင်ဆွဲဆန့်ပေးနေတဲ့၊ အကုသိုလ်တွေ ကို အလုံးလိုက် အရင်းလိုက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀အတွင်းဝင်ခွင့်ပေးနေတဲ့ အရာတွေပါပဲ။
ကျွန်တော့်အသက် (၂၀) ပြည့်နှစ် မွေးနေ့မှာတော့ ကျွန်တော် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများနဲ့ စမ်းသပ်အစစ် ဆေးခံခြင်းများ၊ သဘောတူညီချက်များရယူ၍ ကျွန်တော့်ရဲ့ (ရှိနေသောလည်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရတဲ့ အကြီးစား အရိပ်ကြီး ဖြစ်တဲ့) ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ကျွန်တော့်ရဲ့ နာမ်က နောက်ထပ်ဘ၀တစ်ခုသို့ အကုသိုလ်များအကြွေး ယူဖို့ သွားတဲ့အခါ ဆေးပညာကိုလေ့လာနေကြတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနဲ့ ပညာရှင်များ အသုံးပြုဖို့ အတွက် Dead Body အဖြစ် လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်လေ ဒီဘာမှသုံးစားမရတော့တဲ့ ခန္ဓာကြီးကို မြေမြှုပ်ဖို့နေရာပေးမယ့်အစား လောကကို သာယာလှပစေမယ့် သစ်ပင်၊ ပန်းမန်တွေစိုက်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် လူသားနဲ့ သတ္တ၀ါတွေ အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် ဟင်းသီး၊ ဟင်းရွက်၊ သစ်သီးတွေ စိုက်ရင် ပိုများ အကျိုးရှိမလားလို့...။ အဲ...။ မီးရှို့လိုက်တော့ရော....။ အင်း....။ မီးရှို့လိုက်တော့ လူတွေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ကို ဒုက္ခပေးမယ့် မီးခိုးငွေ့တွေနဲ့ Carbon Dioxide တွေပဲ ထွက်လာမယ်လေ...။ ဟုတ်တယ်မလား...?
ကဲ....။ ဒီလိုဆို ကိစ္စအားလုံးတော်တော်လေးကို ရှင်းသွားပြီ မဟုတ်လားဗျာ...?
နေ၀င်ချိန် ပန်းချီကား တစ်ချပ်ပါပဲ....။
ဒါတွေကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ ပြင်ဆင်မှုတစ်ချို့တစ်ဝက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြောကျွန်တော့်ရဲ့ ဆန္ဒတွေ ကို သဘောထားကြီးစွာ နားလည် လက်ခံပေးခဲ့ကြတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးကိုတော့ ကျွန်တော်အလွန်တရာ ကျေးဇူးတင် ဦးညွတ်ပါတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ....။
ကျွန်တော် (တို့) က သူများတွေ ပြောပြောနေကြ သလိုပေါ့ဗျာ...။ " လူမဟုတ်တဲ့ လူတွေ" ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ (မပိုင်တာခြင်းအတူတူ) သူများတွေလို မပိုင်ဘူးပေါ့...။ ဘယ်နေရာမှာသေမယ်...။ ဘယ်အချိန်မှာသေမယ်....။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သေမယ်....။ မရေရာ လှပါဘူး...။ ရှေ့တန်းတစ်နေရာမှာပဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပျော်ပျော်ပါးပါး အသေသတ်တမ်းကစားရင်း အသက်ထွက်ချင် ထွက်သွားမယ် ၊ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ရစရာမရှိအောင်စုတ်ပြတ်ပြီး သေမယ်ဆိုရင်လည်း မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဆေးရုံပေါ်က မျက်စိအလင်းမရတဲ့ လူတစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) နှစ်ယောက်နဲ့၊ ဆေးကျောင်းနဲ့ ဆေးရုံက ပညာရှင်နဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် "Sorry ပါ" ပေါ့...။
အကယ်၍များ ကံကြမ္မာဆိုတဲ့ (မြေနိမ့်ရာ လှံအမြဲစိုက်စေတတ်တဲ့၊ ရေနစ်သူကို ၀ါးအမြဲကူထိုးတတ်တဲ့) အူကြောင်ကြားကောင်ကများ သက်ညှာစွာ စဉ်းစားပေးလို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အခန်းအနားလေးကို ကျွန်တော် စိတ်ကူး၊ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့လို ပုံစံမျိုးနဲ့ ကျင်းပခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့.....။ အတိုင်းထက်အလွန်ပေ့ါဗျာ...။
p.s- မောင်မျိုး Tag ထားတဲ့ " ၁၀ ရက်သာကျန်တော့မယ်ဆိုရင်" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကို ကျွန်တော့်ရဲ့ အမြင်၊ လုပ်ဆောင်ချက်အချို့နဲ့ ဖြည့်စွက်ထားကြောင်းပါ...။ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ရာ အမြင်များသည် ကျွန်တော့်၏ သီးသန့် အမြင်များသာဖြစ်သောကြောင့် အပြည့်အ၀မှန်ကန်သည်ဟု မဆိုလိုကြောင်းပါ......။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:34 AM 18 comments:
Labels: Article, Essay, Personal
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:39 AM 42 comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:57 AM 11 comments: